JMeter, manao fitsapana enta-mavesatra ary mandrefy ny fahombiazan'ny Ubuntu | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Apache JMeter isika. Ity rindrambaiko ity dia rindrambaiko loharano misokatra izay efa zatra manao fitsapana enta-mavesatra ary mandrefy ny fahombiazan'ny rafitra. Ny fampiharana Apache JMeter dia fampiharana Java madio 100%. Ity fampiharana ity dia nampiasaina tamin'ny voalohany mba hitsapana ny rindranasa amin'ny Internet na ny FTP. Androany, ampiasaina amin'ny fitsapana miasa, fitsapana lozisialy, sns. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba hananana ilay programa amin'ny Ubuntu 18.04.
Apache JMeter dia azo ampiasaina fanandramana zava-bita amin'ny rindranasa dinika sy statika na fampiharana Internet. Izy io dia azo ampiasaina hanamboarana enta-mavesatra mavesatra amin'ny mpizara, vondrona mpizara, tamba-jotra na zavatra hanandramana ny tanjany na hamakafaka ny zava-bita ankapobeny amin'ny karazana entana isan-karazany.
JMeter dia maka tahaka ny vondron'ireo mpampiasa mandefa ny fangatahana amin'ny mpizara kendrena ary mamerina ny mombamomba ny statistika ho an'ny mpizara kendrena na serivisy amin'ny alàlan'ny sary an-tsary.
1 Apache JMeter General Features
2 Sintomy ary tantano ny Apache JMeter
Apache JMeter General Features
Una GUI sariaka. Mora ampiasaina izy io ary tsy mila fotoana hahafantarana ny interface an'ny programa.
Sehatra tsy miankina. Ny programa dia Java 100%Noho izany, afaka mihazakazaka amin'ny sehatra maro izy io.
Multi-kofehy. JMeter dia mamela santionany miaraka amin'ny lahasa isan-karazany ataon'ny vondrona kofehy hafa.
Ny valin'ny fitsapana dia azo jerena amin'ny endrika hafa toy ny graf, latabatra, hazo ary fisie log.
Extensible be. JMeter koa manohana plugins fampisehoana izay mamela antsika hanitatra ny fitsapana.
Paikady fitsapana marobe. JMeter dia manohana paikady fitsapana maro, toy ny fitiliana enta-mavesatra, fizahana fizarana ary fitsapana miasa.
JMeter koa mamela ny fanatanterahana ny fitsapana zaraina eo amin'ny solosaina samihafa, izay hiasa amin'ny maha mpanjifa azy.
Simulation. Ity fampiharana ity afaka maka tahaka ireo mpampiasa marobe amin'ny kofehy miaraka, mamorona enta-mavesatra mavesatra mifanohitra amin'ny lozisialy an-tranonkala andrana.
Fanohanana an'i protokol maromaro. Tsy vitan'ny hoe manohana ny fitsapana ny lozisialy an-tranonkala izy io, fa manombana ihany koa ny fahombiazan'ny mpizara data. Ny protokolola rehetra toy ny HTTP, JDBC, LDAP, SOAP, JMS, FTP, TCP, sns ... dia mifanaraka amin'ny JMeter.
Record & Playback firaketana ny asan'ny mpampiasa amin'ny navigateur.
Fitsapana ny script. JMeter dia afaka ampidirina miaraka Bean Shell & Selenium ho an'ny fanandramana mandeha ho azy.
Lisansa loharano misokatra. Ity programa ity dia afaka tanteraka. Raha te hahafantatra ny kaody loharano na ny lalindalina kokoa momba ny toetran'ity rindranasa ity izahay dia afaka mijery ny pejin'ny GitHub an'ny tetikasa.
Sintomy ary tantano ny Apache JMeter
Ity rindranasa ity dia mitaky ny hametrahana java ao anaty masinina, ka alohan'ny hametrahana ny fampiharana eo am-pelatanana dia ilaina izany alao antoka fa nametraka Java ianao amin'ny masininay. Azontsika atao ny manamarina izany amin'ny alàlan'ny fanokafana ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary ny fanoratana ity baiko manaraka ity:
Raha tsy manana Java ao amin'ny Ubuntu izahay, dia nisy mpiara-miasa iray nanoratra lahatsoratra iray lasa izay izay ilazany amintsika ny fomba hametraka kinova Java samihafa.
Aorian'ny fametrahana Java dia tsy maintsy sintomy ny kinova farany stable Apache JMeter avy amin'ny tranokala ofisialiny. Raha mahazo aina isika amin'ny fampiasana ny terminal (Ctrl + Alt + T), dia afaka mampiasa ny baiko wget haka ny fonosana isika:
Rehefa vita ny fampidinana dia tonga ny fotoana esory ny fisie JMeter alaina. Ao amin'io terminal io ihany no anoratantsika:
Aorian'ny fitrandrahana ny rakitra dia tsy maintsy mivantana mankany amin'ny lahatahiry bin, ao anatin'ny apache-jmeter-4.0. Raha vantany vao tonga any izahay, dia hanatanteraka ity fisie manaraka ity:
Aorian'ny fampiharana dia hiseho ny efijery manaraka. Miaraka amin'izany, ny fomba apetraho Apache JMeter amin'ny ubuntu 18.04 mifarana.
Mba hahalalana bebe kokoa ny fomba fiasan'ity programa ity dia azontsika atao jereo ny antontan-taratasy ataon'ny mpanamboatra azy ho an'ny mpampiasa ao amin'ny tranonkalany. Azontsika atao koa ny mijery ny fisalasalana momba ny programa ao amin'ny Wiki ny momba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » JMeter, manaova fitsapana enta-mavesatra ary refeso ny fahombiazan'ny Ubuntu
Aza mihazakazaka jmeter ho faka. Tsy ilaina izany.
Ahoana ny fomba hanafainganana an'i Firefox ao amin'ny Ubuntu 18.04